China Plano Convex Cylindrical Lens, Meniscus Lens, Optic Lens Mugadziri
Tsanangudzo:Plano Convex Cylindrical Lens,Meniscus Lens,Optic neLens,Cylinder Lens,,
Zvigadzirwa zve Plano Convex Cylindrical Lens , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Plano Convex Cylindrical Lens , Meniscus Lens vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Optic neLens R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Iyo meniscus cylindrical lens inogona kushandura iyo inopfuudzwa yendege wave wave weiyi cylindrical wave kana iyo cylindrical wave mune yegege wave kana kuti idenderedzwa wave. Ino lens cylindrical inogona kugadzirisa kuona kunoonekwa....
Cylindrical lenses anowanzo shandiswa kutarisa irinouya mwenje kumutsara, kana kushandura chimiro chechimiro chemufananidzo. anoshandiswa kune optics, lasers, medical science, zvemagetsi, tele-kutaurirana nevamwe. Realpoo Optics inogona kupa...
Cylindrical lenses anowanzo shandiswa kutarisa inopinda mwenje kune tambo, kana kushandura chimiro chechimiro chemufananidzo. anoshandiswa kune optics, lasers, medical science, zvemagetsi, tele-kutaurirana nevamwe. Realpoo Optics inogona kupa...
China Plano Convex Cylindrical Lens Vatengi
Plano-convex cylindrical lenses inoratidzira imwechete plano uye imwechete convex cylindrical pamusoro, nepo yavo yakatarisa iri yakanaka. Aya malenzi anoshanda chete mune chiyero chimwe pane maviri, achienzaniswa neano-convex spherical lenses.
Plano convex cylindrical lenses anoshandiswa kumanikidza mwenje mune 1 axis. Kuti ugadzire mutsara wemutsara kubva panzvimbo yechiedza uye kushandura chimiro chemufananidzo, yakanaka (convex) cylindrical lens inoshandiswa. Iyo zvakare inoshandiswa kutarisa yakakwenenzverwa chiyedza mwenje kune tambo. Plano convex cylindrical lenses anowanzo shandiswa pamutsetse detector arrays, anamorphic danda kuumba, laser fungidziro, laser tambo inotarisa, uye kuvhenekera kwekucheka.
Plano Convex Cylindrical Lens Meniscus Lens Optic neLens Cylinder Lens Plano Concave Cylindrical Lens